SAMOTALIS: Ma Maqli Jirteen: “Nimaan Aqoon Baa Waraabe Lax Ka Rita; Qormadii Boobe Yuusuf Ducaale
Ma Maqli Jirteen: “Nimaan Aqoon Baa Waraabe Lax Ka Rita; Qormadii Boobe Yuusuf Ducaale
Dadka qaar baa saar baasi ku jiraa, iyaga ayaaba saxaafadda u yeedha iyaga oo is-leh magaca iyo maamuus ayaad ka heli doontaan. Nimaan aqoon ayaa saxaafad u yeedha. Waa dad aan ogeyn in ay Amiiraddii Diana u dhimatay saxaafad ay ka ordaysay. Bal ka warrama qofka saxaafad iyo shaashad doonanaya isaga oo aan kala garanayn in uu goolal dhashanayo, in uu cadawgiisa u dhalinayo iyo in uu isaguba iska dhalinayo.
Soo-saarista barnaamij idaacadeed iyo samaynta filim muuqaal ahi waa laba wax oo aad u kala duwan. Labaduba aqoon iyo khibrado gaar ahaaneed ayay u baahan yihiin. Sida ay ugu adag tahay filimyahanka in uu barnaamij idaacadeed sameeyo ayay idaacadyahankana ugu adag tahay in uu filim sameeyaa.
Waa TV-geennii kale ee Qormo-gube. Boqorkii/Garaadkii ama Suldaankii la duubayay warba kama hayn. Mar danbe ayaa weriyahoodii ku hambaberayaa col kale oo beesha ka tirsan oo Nayroobi shir-jaraa’id ku qabtay. Mise waxay deedafaynayaan madax-dhaqameedkan la duubay. Ku-ye: “Arrintaasi mid aanu u dhan nahay ma ahayn. Waa been iyo arrin aan sal iyo raad midnaba lahayn.” Dawakhaad iyo dayow. Carruurihii oo dadka waaweyn iyo waalidkood la daawnayay shaashadaha ayaa yaabaya, markaasay waalidkooda su’aasha ku boobayaan: “Kee ayaa run sheegaya?” bal adba maxaad odhan lahayd. Af kala qaad! Marar kale waa Qolo-raar, Qudhun-raac, ‘Qurum-qaram’ iyo wax aanad ka dhammaanayn. Qiimo-tirka wararka iyo barnaamajyadaba waxaynu tusaale u soo qaadan karnaa TViiga Hadhka Qaranka. Kaaga-daranta maxaa kaa xumaan lahaa haddii uu hadh-qoodaal (dhan) noqon lahaa. Waa hadh-dacaar (teel-teel). Kolley Qaranka laguma sheegayn, waxa se loo badinayay in qof leeyahay ama qoysba. Qaar kalena waxaaba laga sheegayay Qurbaan-wadaag ayaa iska leh. Waxba ku dheeraan maayo e’, warka waa quluul, ama waa huluul. Ma Barnaamajyadaa! Waa qal-qalan ama waa ‘hal-halan’. Xayaysiiskaa! Waa qab-qaban aan qub-quban.
Intaa waa ay dhurmayaan hugmayaan…..hadrayaan. Tanna waa ay ka wada siman yihiin inta naxliga iyo naca beertaa. Waa TVii kale. Waa Qalin-raar. Waa ‘marfuucal qalam’. Xaaskayga, Mujaahid Faadumo-cawo oo I ag fadhiday ayaa yaabtay oo gacmihii dhabannada ku engegeen. Ku-ye: “Nimankani miyaanay hadalka ka daalin?” Waxay ku cel-celinayeen kow iyo labaatankii sannadood ee dagaallada sokeeye socdeen. Garo’ oo waxa laga soo bilaabayaa 1991kii. Haddana waa ay xanaaqayaan marka ay reer Somaliland yidhaahdaan dal gaar ah ayaanu nahay. Yaa dalka iyo dadka kala jaray? Dhagaxtuurkii Ardayda ee Hargeysa ma been baa? Xasuuqii ka dambeeyay ee aan Soomaali hore u soo marin ma been baa? Dayuuradihii Hargeysa ka kacay ee haddana duqeeyay ma been baa? Sow tii Ibraahin-gadhle yidhi:
Ma taas oo keliya ayaad moodaysaan. Khuraafaadkaa aan raadka lahayn waxa kale oo ka mid ah beri ay odhan jireen: Cabdirasaaq Xaaji Xuseen oo Soomaaliya Ra’iisal-wasaare ka ahaan jiray ayaa warqad lagu qaban lahaa oo sir ahayd liqay xilliyadii gumeysigii Talyaaniga, sidaa darteedna sambabbadii ayaa caddaaday oo ilaa maanta uu u liitaa. Innagu waxaynu garanaynaa wax kasta oo aynu liqnaa haddii ay hunguriga dhaafaan in ay caloosha tagaan oo ay dhex qaadaan xubnaha dheef-shiidka ee aadamaha. Waxaynu aamminsan nahay oo dhab ah in sambabbadu ku lug leeyihiin neefisiga. Laakiin iyagu ma si kale oo inaga duwan ayay u uumman yihiin oo wixii la cunaa marka hore sambabbada ayay sii maraan.